प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न– कालापानी र लिपुलेक भनेको के हो थाहा छ ? – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /News/प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न– कालापानी र लिपुलेक भनेको के हो थाहा छ ?
यो सामाग्री तयार पार्दासम्म प्रधानमन्त्रीको यो ट््िवटमा १०४ रिट्विट आएको छ । अनि उनलाई मेन्सन गरिएका अधिकांश जवाफमा कालापनी र लिपुलेकबारे वा नेपाली भूमि अतिक्रमणको विषयमा जवाफ दिन आग्रह गर्नेहरु निकै धेरै छन् । यो खबर फरकधारमा प्रकाशित छ ।
खुशीको खबर, नेपालमा कोरोनालाई जितेर ८ हजार ४४२ जना घर फर्के